Ny asan’i Jesoa voalohany teto amin’izao tontolo izao – FJKM Ambavahadimitafo Ny asan’i Jesoa voalohany teto amin’izao tontolo izao |
Ny asan’i Jesoa voalohany teto amin’izao tontolo izao
Publié le 17 juillet 2015 à 12:07
05/01/2014 : ==> 17/07
Alahadin’ny Epifania, 05 janoary 2013, nangalana indrindra ny hafatry ny Tompo avy amin’ny Jaona 2:1-12 :
Ny nampodian’i Jesosy ny rano ho divay tao Kana, sy ny nankanesany tao Kapernaomy
1 Ary tamin’ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilia; ary tao ny renin’i Jesosy.2 Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin’ny fampakaram-bady.3 Ary rehefa lany ny divay, dia hoy ny renin’i Jesosy taminy: Tsy manana divay izy.4 Hoy Jesosy taminy: Ravehivavy, moa mifaninona akory Izaho sy hianao? tsy mbola tonga ny fotoako.5 Fa hoy ny reniny tamin’ny mpanompo: Ataovy izay asainy ataonareo.6 Ary nisy siny vato enina mahalany rano indroa na intelon’ny vata [Gr. metatra] avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon’ny Jiosy.7 Dia hoy Jesosy taminy: Fenoy rano ny siny. Dia nofenoiny hatramin’ny molony.8 Ary hoy Jesosy taminy: Tovozy amin’izao, ka ento ho eo amin’ny mpandahatra ny fanasana. Dia nentiny.9 Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay nihaviany (fa ny mpanompo izay nanovo ny rano no nahalala), dia niantso ny mpampakatra izy10 ka nanao taminy hoe: Araka ny fanaon’ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha; ary rehefa nisotro be [Gr. mamo] ny olona, dia vao izay ratsiratsy kokoa; fa hianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny.11 Izany no nataon’i Jesosy tao Kana any Galilia ho voaloham-pamantarana, ka nasehony ny voninahiny; ary nino Azy ny mpianany.12 Rehefa afaka izany, dia nidina nankany Kapernaomy Jesosy mbamin’ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany; nefa tsy nitoetra ela teo Izy.